Tuesday May 03, 2016 - 02:29:49 in Maqaallo by Xarunta Dhexe
Waxa aan isu keenay waxooga dhaqala oo aan isleeyahay waa uu kugu filanayaa Safarkaga Tahriibka,balse war iyo wacaal toona kama hayo xaladu sida ay noqon doonto iyo markasta waxa is badali doona. Indho la'aan iyo dhaga la'aan ayaan doonayaa in aan dhaqaajiyo aniga oo aan cidna Salamu calaykum odhan Walidkii idhalayna ha ahaadee.
Waxyabaha aan ka xasuusto hadaladiisi ayaa waxa ka mid ahaa:-waxa aad safarka ka bilabaysaa Hargaysa, kadibna waxa aad maraysa Adis'ababa waxaad ku xigsiinaysaa Khartuum,waxa aad uga sii gudbaysaa Liibiya,kadibna waxa aad tagaysaa Wadanka Talyaaniga ,markaliya Ninkaasi Mukhalaska ahi Afkiisa muu soo marin in aan SAXARAHA iyo MAGAFE aanu is huranahay hadiiba ALLEH iga badbaadiyana aan BADAHA waawayn dhex jiibaxaayo.
Markii uu hadaladaasi ilahaa runtii waxa ay ila ahayeen kuwo aad ii farax galinaya ,soona dhawaynaya Rajadii iyo yididilaadii aan ku fikiraayay,waxa aan aad u necbaa qofkasta oo Safarka Tahriibka khatar ku sheega ,waxa aan aad u jeclaa Dhagahana aan u raaricin jiray cidkasta oo ka hadlaysa fa'iidoyinka dhoofka.
Markii aanu tagnay Adis'ababa ayaa Qoladii nawaday waxa ay nagu wareejisay Mukhalasiinkale, waxa aad moodaa in aanu nahay Shixnad alaab ah waayo Qoloba qolo kale ayay nagu xawishaa ,kadibna waxaa nala geeyay Guri aad ay dhalinyaro uga buuxdo .
Waxaa noosoo galay Nin ka mid ah Mukhalasiinta oo anan hore u arag waxa uu nagu yidhi si bilaa buuqa u fuula babuurta ,Babuurtii ayaanu fuulay ,kadibna waa ay nala dhaqaaqeen ,waa markii iigu horaysay ee aan dareemo cabsi iyo warwar ,waxaa maskaxdayda kusoo xadiray Argagax ,waayo Adis'ababa waxa ay ila ahayd intii an joogay mid aan iiga duwanayn Dalkaygii balse hada xaaladu waa Bariga dhexe .